FAMPIASANA HERISETRA : Polisy vavy iray naiditra am-ponja 5 taona antranomaizina | NewsMada
FAMPIASANA HERISETRA : Polisy vavy iray naiditra am-ponja 5 taona antranomaizina
Par Freenews sur 21/04/2017
Toy izao no niafaran’ilay tovolahy nodoran’ilay polisy vavy tamin’ny rano mangotraka.
Polisy vavy iray no voaheloka higadra dimy taona antranomaizina sazy mihatra araka ny didy navoakan’ny fitsarana omaly 20 aprily 2017. Tranga niseho tamin’ny volana janoary lasa teo ity, fampiasana herisetra, fanondrahana tamin’ny rano mangotraka, tamina tovolahy iray no niampangana azy tamin’izany. Olona roa izy ireo no voapanga tamin’izany, firaisana tsikombakomba no niampangana ilay olona niaraka tamin’ny tamin’izany. Araka ny fantatra, samy nosazian’ny fitsarana andoa honitra mitentina 5 tapitrisa ariary avy izy roa ireto fa ny an’ity polisy vavy no niampy sazy 5 taona antranomaizina. “Vao niseho io tranga io dia niakatra teo anivon’ny filan-kevi-pifehezan’ny polisim-pirenena io raharaha io. Tamin’izany no nanapahana ny hevitra fa esorina tsy ho polisy intsony io vehivavy io”, hoy ny loharanom-baovao voaray teo anivon’ny polisim-pirenena. Fanapahan-kevitra toy izao no andrasana mikasika ilay raharaha Rabarijaona Tsirava, mpanao gazetin’ny Free News izay nodarohan’ireo polisy tetsy Antanimena, enim-bolana lasa izay. Toa inian’ny eo anivon’ny polisy hampanginina anefa io raharaha io amin’izao fotoana izao. Ny tsy azo lavina, mahafantatra ny olona nanao io tranga mamoafady io ny samy polisy saingy minia manafina fatratra izany. Ny marina anefa tsy maintsy hiseho fa miandry fotoana ny zavatra rehetra.